मेरो मोबाइल – Sadarline
१० श्रावण २०७३, सोमबार १४:३७
मोबाइलको घण्टी किर किर गरी बज्छ । रातको १० बजेको हुन्छ । म आधा निन्द्रामा हुन्छु, यसैले निरन्तर बजिरहेको घण्टीमा ध्या न गई रहेको हुँदैन । तर पनि रातको १० बजे २,३ पटक एकनासले घण्टी बजेको आवाजले मेरो निन्द्रा भंग गर्छ । म फोन उठाउँछु । निन्द्रैमा ‘हेलो’ भन्छु । उताबाट जवाफ आउँछ, ‘अलि ठूलो आवाजले बोल्नुस् न’ । म अझै ठूलो आवाज पारेर ‘हेलो’ भन्छु र सोध्छु । ‘कसलाई खोज्नु भएको ?’ उसले प्रतिप्रश्न गर्छ , ‘यो सुन्तलीको नम्बर होइन ?’ ‘सरी रङ नम्बर’ भनेर फोन राखिदिन्छु । र फेरि सिरक तानेर सुत्ने कोसिस गर्छु । भोलिपल्ट विहान ५ बजे उठ्नु पर्छ , त्यसैले निदाउने कोसिस गर्छु तर निद्रा लाग्दैन ।
उफ् ! त्यसलाई किन किन फोन गर्नु परेको ? त्यही नम्बरमा फोन गरेर गाली गरुँ जस्तो लाग्छ । विहान ५ बजे उठेर मुखसुख धुन्छु । चियाको सुर्को तान्दै रेडियो सुन्छु । अलिअलि बुढेसकालले छोएछ , जस्तो लाग्छ । चिया पिउँदै रेडियो सुन्न खुब मजा लाग्छ । यतिकैमा विहानको नित्य कर्म सकाई बाथरुम जान्छु । भरखर ट्वाइलेट भित्र छिरेको मात्र हुन्छु , मोबाइलको घण्टी बज्छ । मेरीे बहिनी दगुर्दै आएर मोबाइल दिन्छे । यतिकैमा फोनको घन्टी बज्न बन्द हुन्छ । भान्छामा बसेर भात पकाउँदै गरेकी ममता फनक्क रिसाएर फर्किन्छे, ‘को होला विहान पाँचै बजे फोन गर्ने ? ’मैले भन्छु ‘नरिसाउन ममता, कसैलाई जरुरी परेर फोन ग¥यो होला ।
मोबाइलले आजकालका युवा पुस्ता, अफिसे र कामदार सबैलाई एकदमै नजिक बनाईदिएको छ । यो ठूलो ब्रम्हाण्डलाई नै एउटै बनाइदिएको छ । सबै काम र कुरा मोबाइलबाट क्षणभरमा गर्न सम्भव छ । शान्तिदेखि क्रान्तिका कुरा सबै मोबाइलमा गर्न सकिन्छ । तर पनि मोबाइलबिना अब कोही रहन सक्ने अवस्था छैन । ‘आईसिटी’ मा आएको क्रान्तिले मानिसलाई मात्रै होइन अब त लाग्छ कुकुरको मगजलाई पनि मानिसको जस्तो बनाइसकेको छ । व्याग र मोबाइल लिएर तल अफिस रुम तिर झर्छु । यत्तिकैमा एकजना ‘सिजेएमसी’ को शिक्षकको फोन आउँछ । नेटवर्क खराब भएकोले केही पनि सुनिँदैन । ‘हेलो माम , माम ’ मात्र गरेको सुनिन्छ । के गर्नु ? सरले भन्ठान्नु भयो होला – मेडम सुनेर पनि नसुने झैं गर्नुभो । खै आजकल त के हो मोबाइल बोक्न भन्दा नबोक्नै मन पर्न थालि सक्यो ।
समय परिवर्तनशील छ । केही दशक अगाडि मानिसहरु रेडियोबाहेक केही सुन्दैनथे । सरकारी पत्रिकाबाहेक पढ्ने अवस्था थिएन । रेडियो नेपाल नै आम सञ्चारको एक मात्र साधन थियो । तर यस आधुनिक युगमा संसार यत्ति साँघुरिएको छ , आम मानिस खाना नखाइकन बस्न सक्छ तर एक सेकेण्ड पनि सञ्चारविहीन भएर रहन सक्दैन । अहिले खल्तीमा भएको मोबाइलबाट उसले विश्व नियाल्न सक्छ । विश्वको कुनै पनि भागको सूचना मोबाइलमा एक सेकेण्डमै प्राप्त हुन्छ । तपाई इन्टरनेट, ‘एसएमएस’ गेम, भिडियो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ । मोबाइल प्रेम गर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ भने मोबाइल देशमा परिवर्तनको संवाहक पनि घाँडो बनेको छ । तर, अफसोच मलाई भने आजकाल यो घाँडो भएको छ । यस्तै सोच्दै हुन्छु, मेरो मोबाइलको घन्टी फेरी बज्छ । ‘हेलो’ भन्छु सुन्दै सुनिदैंन घाँटी चिरिने गरी ‘हेलो’ भन्छु । अझ कस्तो नेटवर्कको खराबी टावरै टिप्दैन । केही जरुरी पो थियो कि भनेर रिडायल गर्छु । अहँ, ‘तपाईले डायल गर्नु भएको नम्बर व्यस्त छ पुनः डायल गर्नु होला अ भन्छ । जत्तिपल्ट गरे पनि यही भन्ने गरेकाले मोबाइल स्वीच अफ गरिदिन्छु । र आनन्दले बस्छु । मैले मात्र के टाउको दुखाउनु ? जरुरी भए मेल गर्छन् वा अफिसको नम्बरमा फोन गर्छन ।साँझ मोबाइल स्वीच अन गरेपछि यत्ति धेरै मेसेज आउँछन् पढ्नै भ्याइदैन । गल्ती गरेछु जस्तो लाग्छ मनमनै जब यस्तो गर्नेछैन भन्ने अठोट गर्छु । अहो , एकजना साथीसँग २० – २५ हजार रुपैँया लिनु थियो । निक्कै महिना अगाडिको कुरा हो । १५ दिनभित्रै दिन्छु भन्थ्यो तर खै आज छ महिना बितिसक्दा पनि फर्काउँदैन । यसैले होला म कसैलाई सरसापट दिन रुचाउन्नँ ।
मोबाइल गर्छु । ‘हेलो’ उसले नचिनेझैं उत्तर फर्काउछ । ‘को बोल्नु भएको ?’ ‘म मञ्जु बोलेको क्या मञ्जु ।’ सरी रङ्ग नम्बर भनेर फोन राखिदिन्छ । पैसा लिने बेलामा लिन्छस् ऐले नचिनेझैं गरी फोन राखिदिन्छस् । फेरि फोन गर्छु तर उसले फोन बिजी बनाइदिन्छ ।
यो मोबाइलमा फोन गर्दा नम्बर नजाने भएपनि कस्तो हुन्थ्यो ठिकै छ । कसो नभेटिएला एक दिन । यस्तै सोच्दै मेरो कलेजको अत्यन्त निकट साथीलाई फोन गर्छु । त्यही कोठामा बसी बसी उसलाई फोन डाइरेक्ट लाग्छ । हेर न यो मोबाइलको कमाल जादुको छडी हो कि के हो ? अर्को साथीलाई मोबाइल गर्दा चाहि लाग्दै लागेन । लामो समयपछि भेटेको साथीसँग दुःख सुखःका कुरा गरी हामी विदा भयौं । ‘वाई’ भनी नसक्दै मोबाइलको घण्टी बज्छ । ‘हेलो’ भन्छ । मञ्जु माम , विहानदेखि हजुरलाई मोबाइलमा ट्राई गरेको लाग्दै लागेन । के हो हजुर यस्तो बिजी ? आवेगमा शब्दहरु वाणझै बज्रन्छ । ‘मोबाइल पनि उठाउन गाह्रो लाग्ने भए एउटा सेक्रेटरी राख्नुस् ।’ तर मेरो यो पीडा कसले बुझ्ने ?मलाई पनि साह्रै झोक चल्यो र जवाफ दिएर ‘एनटिसी’ लाई भन्नुस् , मेरो मोबाइल दिनभर स्वीच अन छ ।
एक दिनको घटना हो । एकदम जरुरी मिटिङ थियो तर फोन नगरीकन जानुको अर्थ थिएन । यसैले मोबाइल गरें । तर जतिपटक फोन गरे पनि द मोबाइल डाइल्ड कुड नट वि कनेक्टेड भन्छ बा ! के के नै खाइदे जस्तो ?अब के गर्ने होला ? महत्वपूर्ण बैठक भएकाले ५०० रुपैयाँ तिरेर ट्यााक्सीमा बैठक स्थलसम्म आएँ तर दुखको कुरा पालेले बाहिरबाटै ‘आज अध्यक्षज्यूको बुवा वित्नु भएकोले मिटिङ कान्सिल भयो, अर्को पल्ट आउनु भन्दिनु भन्नु भएको छ’ भन्छ । भनि खबर गर्छ समयमा सम्पर्क गर्न नसक्दा दुःख पाइयो । कसलाई दोष दिनु ? सायद वहाँको पनि फोन लागेन होला । त्यहाँबाट सरासर कलेज आएर कलेजको काम सिध्याउने निर्णय गर्छु । सधैभरीको बैठकले कलेजको काम लथालिङ्ग हुन्छ । यसैले जसरी पनि अब कलेजको काम सिध्याएर मात्र मन अन्त केन्द्रित गर्ने निर्णय गर्छु । यत्तिकैमा मोबाइलको घण्टी बज्छ ।’ हेलो हजुर हलो, मञ्जुजी तपाईर्को फुपुको आज बिहान बित्नु भयो, तपाई तुरुन्त पशुपति आर्यघाट आउनुहोस ।’
पशुपतिबाट थाकेर घर फर्कन्छु । बाथरुम पसेर आफू सफा हुने क्रममा मुखभरी साबुनको फिज हुन्छ । यता ममता कराउँदै आउँछे । ‘एकदम जरुरी छ रे कुरा गरिस्यो रे !’ ‘म बाथरुममा छ भन्दिनु । ’ ‘उ भन्दै जान्छे, ‘अँहै हुँदैन रे, २ मिनेट मात्रै कुरा गर्ने रे ।’ ‘ल, हुन्छ लेऊ’ म मुख पखालेर कुरा गर्न थाल्छु । यतिकैमा मेरो मोबाइल हातबाट चिप्लेर तल झर्छ, पानीमा पर्छ । म पानीभित्रको मेरो मोबाइल एक टकले हेरिरहन्छु ।
सदरलाइनडटकम ११ साउन, नेपालगन्ज : लगातारको वर्षातको कारण राप्ती नदीको सतह खतरा भन्दा माथि पुगेको छ । बाढी मापनकेन्द्र खासकुस्मा बाँकेले दिएको जानकारी अनुसार मंगलबार दिउसो १२ बजेसम्म ५ मिटर ८२ सेन्टीमिटर नाघेको छ । विहान ११ बजे नै खतराको संकेत ५ मिटर पार गरेको थियो । बाढीमापन केन्द्रका गेज […]
३ फाल्गुन २०७८, मंगलवार १२:५४
८ श्रावण २०७३, शनिबार ०७:३२